Xoogaga Mujaahidinta Dalka Suuriya Oo Ku Dhawaaqay Duullaan Cusub. – Calamada.com
Xoogaga Mujaahidinta Dalka Suuriya Oo Ku Dhawaaqay Duullaan Cusub.
calamada June 28, 2016 2 min read
Xoogagga Mujaahidiinta ee Dalka Suuriya iyo Kooxaha Kacdoon wadayaasha oo iskaashanaya ayaa waxay ku dhawaaqeen duullaan ballaaran oo ay ku doonayaan inay ku xoreeyaan Mandiqadda Jabalu Turkumaan ee Gobolka Laadiqiyah ee Waqooyiga galbeed ee Wadankaasi.
Howl-galkan oo loogu magac daray Macrakada Al-Yarmuuk ayaa waxaa uu billowday gelinkii hore ee maalintii Isniintii ee shalay, iyadoona Xoogagga Mujaahidiintu ay durbadiiba horumar weyn ka sameeyeen dagaalka, iyagoo illaa iyo hadda qabsaday inkabadan tobon deegaan.
Xoogagga Dagaalka ka qeyb qaadanaya waxaa ka mid ah kooxaha ku mideysan Isbaheysiga Jeyshul Fatxi sida Jabhatu Nusrah, Al-Xizbul Islaami Al-Turkistaani, iyo Feylaqu Shaam, waxaa sidoo kale dagaalka ka qeyb galaya qaar ka tirsan Kooxaha Kacdoon wadayaasha sida Jeyshu Nasri iyo Jeyshul Cizzah.
Waabarigii hore ee maanta oo Talaado ah, Jamaacada Jabhatu Nusrah ayaa ku dhawaaqday Â inay la wareegtay deegaanka Naxshaba iyo tuulooyinka ku dhow-dhow, waxay sidoo kale Mujaahidiintu ay la wareegeen tuulooyin ay ka mid yihiin Al-Maczala, Al-Xaakuurah iyo Al-Xamaraat oo dhammaantood hoos yimaada Mandiqadda Jabalul Turkumaan ee Gobolka Laadiqiyah.
Shabakadda lagu magacaabo Ad-durar Ash-Shaamiyah ayaa kasoo xigatay ilo wareedyo Meliteri oo ku dhow dhow Taliska hoggaaminaya howl-gallada ka soconaya Gobolka Xeebta ee dalka Suuriya in tira koobyada horudhaca ah ee ay sameeyeen ay muujinayaanÂ in 45 Askari oo Ciidamada Nidaamka Al-Asad ka tirsanaa in illaa iyo hada lagu dilay dagaalka halkaas ka soconaya.
Duullaanka ballaaran ee xoogaga Mujaahidiinta iyo Kooxaha Kacdoon wadayaasha Suuriya kaga dhawaaqeen Gobolka Laadiqiyah waxa uu imaanayaa laba bilood kadib markii Ciidamada Nidaamka Al-Asad oo taageero xagga cirkaa ka helaya diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay la wareegeen dhul ballaaran oo hoos taga Mandiqadda istaraatiijiga ah ee Jabalu Turkumaan, waxaana kooxaha isbaheysanaya ay hadda doonayaan inay dib ula wareegaan deegaanadii horey looga qabsaday.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 23-09-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 23-09-1437 Hijri.